China Cryogenic oxygen osisi na-efu mmiri oxygen osisi ndị na-emepụta na ndị na-eweta ya | Ma ọ bụ
1: Thekpụrụ atụmatụ nke osisi a bụ iji hụ nchekwa, nchekwa ike na ọrụ dị mfe na ndozi. Teknụzụ na-eduga n'ọkwá n'ụwa.
Azịza: Asịwo chọrọ nza nke mmiri mmiri mmepụta, n'ihi ya, anyị na-enye n'etiti mgbali ikuku egweri usoro ịzọpụta itinye ego na ike oriri.
B: Anyị adopts egweri ikuku Compressor na elu, obere ọnwụnwa. usoro mmeba iji chekwaa ike oriri.
2: Ọ na - anabata teknụzụ njikwa kọmputa DCS iji chịkwaa ngalaba isi, ngalaba mpaghara n'otu oge. Usoro a nwere ike nyochaa usoro ihe ọkụkụ niile.
Separationlọ nkewa ikuku na-adabere n'akụkụ isi esi dị iche iche nke ikuku ọ bụla na ikuku. Ikuku bu nke mbu bu, kpooro ya nke oma ma wepu H2O na CO2. Mgbe obi jụrụ na ọkara okpomọkụ okpomọkụ Exchanger ruo eru liquefaction okpomọkụ, ọ na-agbazi na kọlụm na-enweta mmiri mmiri oxygen na mmiri mmiri nitrogen.
Nke a na osisi bụ molekụla myọ ọcha ikuku na turbo expander usoro.
Mgbe ewepụchara ájá na adịghị ọcha n'igwe na ikuku, ikuku na-aga n'igwe ikuku ikuku iji pịa ikuku na 1.1MpaA, ma mee ka ọ dị mma ruo 10 'na ikuku ikuku. Mgbe ahụ ọ na-abanye na ọrụ ọzọ na-arụ ọrụ sịnịma na-arụ ọrụ iji wepu H2O, CO2, C2H2. A na-enwe ikuku dị ọcha site na expander wee banye igbe oyi. Enwere ike ikewapụ igwe ikuku na ngalaba 2. Mgbe emechara ka 256K, otu ngalaba na-adọrọ na oyi 243K, mgbe ahụ, ọ na-anọgide na-mma na isi okpomọkụ Exchanger. A ga-adọta ikuku dị mma na onye na-emefu ihe, otu akụkụ nke ikuku gbasaa na-abanye n'ime onye na-ekpo ọkụ ọkụ ọkụ iji kpoo ọkụ, mgbe ahụ ọ na-apụ na igbe oyi. Akụkụ ndị ọzọ na-aga na kọlụm elu. A na-eme ka akụkụ nke ọzọ dị jụụ site na mmiri mgbapụta, wee gaa na kọlụm dị ala mgbe agbatịchara ya.
Mgbe ikuku dịzi edozi, anyị nwere ike ịnweta ikuku mmiri, mmiri mmiri nitrogen na mmiri mmiri nitrogen dị ọcha na kọlụm dị ala. Mmiri ikuku, mmiri nitrogen na-ekpofu mmiri na mmiri dị ọcha nke nitrogen ackedụrụ site na kọlụm dị ala na-aga na kọlụm dị elu mgbe mmiri mmiri dị jụụ na mmiri oyi dị ọcha. Mgbe emezigharị na kọlụm dị elu, anyị nwere ike ịnweta 99.6% ikuku oxygen dị ọcha na ala nke kọlụm dị elu, ọ na-apụ dị ka ngwaahịa. Otu akụkụ nke nitrogen a mịrị si n'elu kọlụm enyemaka na-apụ na igbe oyi dị ka ngwaahịa.
Wasrogen nitrogen ackedụ si n'elu kọlụm dị elu na-apụ na igbe oyi mgbe onye na-ekpo ọkụ na onye na-ekpo ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ. Ckedzụ akụkụ ya, ọ na-aga molekụla myọ ọcha usoro dị ka regenerative ikuku iyi. A na-egosipụta ndị ọzọ.
Nke gara aga: Cryogenic ọkara size mmiri mmiri oxygen gas osisi Liquid Nitrogen Plant
Osote: Cryogenic ụdị elu oru oma elu-adị ọcha nitrogen ikuku nkewa osisi mmiri mmiri na oxygen generator
Industria Liquid Nitrogen Generator Akụrụngwa
Mmiri Nitrogen Production Plant